Qodista Dahabka leh Webka 2.0 | Martech Zone
Waxaan la hadlayey saaxiibkay wanaagsan, Bob Flores, kaasoo hormuud ka ah warshadaha Telecom. Bob wuxuu wax ku baraa shirkadaha hogaaminta shirkadaha wuxuuna ku takhasusay dhisida waxtarka warshadaha Telecom. Bob wuxuu i weydiiyay caawa waxa aan u maleynayo in fikradda weyn ee xigta ay tahay. Waa tan waxa fekerkaygu ahaa:
Ma jiraan lacag badan oo laga helo internetka adigoo si fudud u dhisaya bog. Internetku wuxuu ku dhex milmayaa warbaahin badan waxaana dhowaan noqon doonaa shirkadda 'cable' ee meeraha oo leh bilyan kanaal. Iibsashada magac domain weyn iyo dhisida goob keeneysa malaayiin ayaa hadda wax badan u eg iibsashada tigidhka bakhtiyaa-nasiibka. Waa raqiis… laakiin fursadaha ayaa ah inaadan dhaqso u soo celin doonin lacagtaada waqti dhow.
Shirkadaha waaweyni waxay marba marka ka sii dambeysa ku sii siqayaan is dhexgalka iyo is dhexgalka bulshada. Halkii ay riixi lahaayeen boggooda - waxay u fududeynayaan dadka kale inay riixaan waxyaabaha ku jira. Washington Post ayaa xitaa galaya dagaalka - iyagoo furaya waxyaabaha ay ka kooban yihiin si loogu riixo qof kasta oo codsada. Dalladda Websaydhku waxay xitaa ka shaqeyneysaa inay dhisto heerar ku saabsan wadaagista macluumaadka iyada oo loo marayo webka… eeg Shabakadda Semantic. (Iyo a maqaal wanaagsan sababta websaydhka Semantic-ka ay u tahay caqabad).
Waa kuwan fursadaha sida aan u arko:
Adeegyada Isku-dhafka - SaaS (Software-ka Adeeg ahaan) ayaa maalmahanba qaali noqonaya. Kaliya shirkadaha waaweyn ee SaaS ayaa awoodi doona inay sii noolaadaan maaddaama faa'iidooyinka faa iidadu ay yaraanayaan. Shirkadahaani waa inay awood u yeeshaan inay si ballaadhan u ballaadhiyaan oo ay sii wadaan dhismaha waxtarka iyo Is-waafajinta Dhammaan Barnaamijyada Barnaamijka (APIs) ama isku-darka mawduucyada (RSS). Taasi waxay ka dhigan tahay in lacagta dhabta ahi ay awood u leedahay inay dhexgasho adeegyadaas ama waxyaabaha ay ka kooban tahay nidaamyada kale ee loogu talagalay codsiyada gaarka ah. Eeg qodobka kor ku xusan ee caqabadaha ku jira Websaydhada Semantic waxaadna bilaabi doontaa inaad aqoonsato sababta aad ugu soo galayso qaybta Adeegga Is-dhexgalka waxay noqon doontaa tallaabo wanaagsan! Waxaa jira caqabado badan oo laga gudbo.
Mawduuc iyo Gobol mash-ups - Awoodda internetka oo ah nidaam caalami ah sidoo kale waa daciifnimo. Way fududahay inaad ku lumiso shabaqa. Waxa sii kordheysa ee caan noqda waa isticmaalka Mashups si loo sinaado API-yada loona keeno dhowr nidaamyo kala duwan arji goboleed ama mowduuc. BlogginWallStreet waa hal tusaale. Ilaalinta Qoyska waa mid kale. Waxaan haystaa saaxiib gacan ka gaystay bilaabida Ilaalinta Qoyska. Waxaan dhawaan aqriyay maqaal ku saabsan BlogginWallStreet. Labaduba waxay ku korayaan boodbooyin iyo soohdin. Eeg MashupCamp wixii dheeraad ah ee ku saabsan Mashups ama akhri David Berlind ee ZDNet.
Is-dhexgalka Tafaariiqda / eCommerce - kani dhab ahaantii waa isku darka # 1 iyo # 2 laakiin runtii waxaan u arkaa fursado waaweyn oo lagu kori karo tafaariiqda iyadoo la adeegsanayo webka. Qiyaas dukaanka suudhka maxalliga ah oo kuu soo diraya farriimo shaqsiyeed oo wata kuuboon aad ku ridi karto dukaanka maxalliga ah. Bakhaarku wuu ogyahay inaad heshay dalabka wuuna kaa filayaa. Tani wax yar ayey ka duwan tahay isgaarsiinta ballaaran iyo dadaalka suuq-geynta ballaaran ee shirkadaha isku dayaya inay kuugu geyso dukaanka maxalliga ah boostada tooska ah ama xayeysiiska wargeysyada. Waa mid maxalli ah, waa mid isku dhafan, waana mid shaqsiyeed.
Intii aan taleefanka ku wada hadalnay waxaan ka wada hadalnay in mid ka mid ah saaxiibbada Bob uu yahay HR VP hay'ad weyn waxayna u adeegsataa Google inay ku sameyso baaritaanno shaqsiyadeed. Sidee taasi u tahay Mashup? Samee Mashup halkaas oo aan ku soo rogi karo resume oo aan si toos ah ula soo wareegi karo dhammaan xogta ay ku hayso shakhsiga shabakadda, baaskiil ku dhex marto makiinado badan oo raadinta ah, baloogyo, boggaga ardayda ka qalin jabisay jaamacadaha, goobaha dambiyada, iwm. in la bilaabo?
Tags: ganacsashoDavid berlinddhexgalkasaasshabakada macnahawarbaahinta bulshadaWebsaytka 2.0zdnet